INkosana uHarry kunye noMeghan bahambisa iDoria Ragland kwiKhaya labo laseBeverly Hills - Indumasi
Eyona Indumasi INkosana uHarry kunye noMeghan Markle banegumbi lokuhlala elitsha eLos Angeles
INkosana uHarry kunye noMeghan Markle banegumbi lokuhlala elitsha eLos Angeles
UDoria Ragland wafudukela kwikhaya laseBeverly Hills likaPrince Harry kunye noMeghan Markle.UBen Stansall - Iphuli yeWPA / imifanekiso kaFetty
I-Duke kunye neDuchess yaseSussex inomntu omtsha ohlala naye eLos Angeles. INkosana uHarry kunye noMeghan Markle bahlala kwindlu kaBeverly Hills yaseTyler ePerry kunye nonyana wabo ononyaka, u-Archie, ukusukela oko bafudukela kuNxweme oluseNtshona.
AbakwaSussex batshintshile baya eLos Angeles, kwaye sele bejongana nemicimbi yezokhuseleko ekhayeni labo. Abakhange bakwazi ukubona abahlobo babo kunye nosapho olusekwe eLos Angeles kakhulu ngenxa yobhubhane we-coronavirus, nangona umama kaMeghan, uDoria Ragland, engahlali kude kakhulu esixekweni. Kodwa ngoku, baya kubona okungakumbi ngoDoria, njengoko wayexelelwe ukuba wafudukela kwindawo yokuhlala yaseSussex.
BONA KWAKHO: INkosana uHarry kunye noMeghan bajolise kubulungisa bobuhlanga kunye nemicimbi yokuPhila kwabaNtsundu
UDoria uncedisa njengomntu ongekho sikweni ngokusemthethweni, ngokwe Ilanga kwaye inceda abakwaSussex ukuba baqhele ubomi babo obutsha ngaphesheya kwechibi. Uzinze kwigumbi lakhe elahlukileyo, ke ngoko unendawo eninzi kuye. UMeghan usondele kakhulu kumama wakhe.Ifoto nguSteve Parsons / Getty Izithombe
UMeghan, ewe, wonwabe kukuba nomama wakhe. INkosana uHarry, ikwanobudlelwane obuqaqambileyo noninazala.
INkosana uHarry kunye noMeghan bazise uDoria ukuba azohlala nabo ngaphambili, njengoko umama kaMeghan naye wafudukela eSussex kwindawo yabo yokuhlala eWindsor, eFrogmore Cottage, kungekudala ngaphambi kokuzalwa kuka-Archie, kwaye wahlala kancinci ukunceda uSussex omncinci. INkosana uHarry kunye noMeghan basazingela ikhaya elisisigxina eLos Angeles.Samir Hussein / Samir Hussein / WireImage
AbakwaSussex abacwangcisi ukuba uDoria ahambe nangaliphi na ixesha kungekudala, kwanaxa bemkile kwindawo yokuhlala kaPerry. INkosana uHarry kunye noMeghan bebekhangela indawo yokuhlala isigxina kunxweme oluseNtshona, kubandakanya indawo yokuhlala eBeverly Hills, kunye nepropathi eBrentwood, Pacific Palisades naseBel Air. Enye yeekhrayitheriya zabo kukuba ikhaya elitsha linendawo eyaneleyo yokuba uDoria abenendawo yakhe eyahlukileyo, yabucala, mhlawumbi enegumbi lakhe lokulala okanye isihlomelo.
INkosana uHarry kunye noMeghan bahlala bexakekile, nanjengoko bahlala bodwa phakathi kwengxaki ze-COVID-19. Bebesebenza kwisiseko sabo esitsha esingenzi nzuzo, kwaye banikwe ingxelo yokuba batshintshe ukugxila kwabo kubulungisa bobuhlanga kwaye baxhasa intshukumo ye-Black Lives Matter.
UDonald Trump akazange aphumelele nje; Waphumelela ngokusebenza ngokuNgenakuthelekiswa nanto
Apho zihlala khona iibhiliyoniyali: Usetyenziso lweeNqila zePlatinamu eNew York eNew York
IPenny isenokungabi naxabiso, kodwa masiyigcine
ezona pilisi zilahlekileyo zamandla
ezona zilungileyo zokuthandana zokusebenza
eyona ndawo yokufumana isondo mahala
akukho mntwana ushiye ngasemva usasebenza ngo-2017
Izitulo zeofisi zemiqolo emibi